HALKAAN KA AQRISO W.W. MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 28-SEP-2020...
Monday September 28, 2020 - 09:36:50 in Wararka by Mogadishu Times
Farmaajo oo sheegay inay jiri karaan Wariyeyaal la Shaqeeya Shabaab Madaxweynaha Soomaaliya Md. Maxamed C/hi Farmaajo oo marti ku ahaa dood cilmiy eed uu soo agaasimay Machadka Raas ee Fal anqeynta Siyaasadda ayaa wax laga weeydii yay wadashaq
Farmaajo oo sheegay inay jiri karaan Wariyeyaal la Shaqeeya Shabaab Madaxweynaha Soomaaliya Md. Maxamed C/hi Farmaajo oo marti ku ahaa dood cilmiy eed uu soo agaasimay Machadka Raas ee Fal anqeynta Siyaasadda ayaa wax laga weeydii yay wadashaqeynta dowladda & Wariyeyaa sha oo mararka qaar dhibaato kala kulma dowladda. Waxaa uu sheegya in do wladda uu hoggaamiyo ay Wariyeyaasha si toos ah ula Shaqeysay,hayeeshee uu sheegay inay jir aan dad u eg Suxufiyiin oo aan khibrad laheyn balse meelo kale xiriir la leh. Madaxweynaha waxaa uu sheegay inay jiri karaan dad Wariyeyaal ah oo la Shaqeeya me elo kale sida Al-Shabaab iyo dowlado Shi sheeye, kuwa soo uu sheegay inay ka Shaqe ynayaan khalqal gelinta dhanka Amniga. Waxaa uu soo hadal qaaday Madaxweyne Farmaajo ansixintii Baarlamaanka labada Aqal ee uu Madaxweynaha saxiixay,wuxuuna shee gay in dadaal badan ay dowladda ku bixineyso la Shaqeynta Wariyeyaasha. Marka laga soo tago hadalka Madaxweyna ha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaa jo ayaa waxaa jiray Saddexdii sano iyo barkii la soo dhaafay in Wariyeyaal dhowr ah lagu xir ay dalka, halka kuwo kale weli xira yihiin.
Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo kala saxiixday Heshiis Deyn cafin ah
Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay aa Shalay kala saxiixday heshiiska deyn ca finta, Hesiiskan oo ka dhacay safaaradda Ma reynkanka ee Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Fed eraalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Dowladda Mareyka nka ayaa Soomaaliya ka cafisay qeybtii uga soo aadday deyn cafintii dalalka Naadiga Paris.
sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Maaliyad da Xukuumadda Federaalka Dr. Cabdiraxm aan Ducaale Beyle ayaa sheegay in ay ku rajo weyn yihiin in deynta lagu leeyahay Soomaal iya la wada cafiyo.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo goobjoog ahaa heshiiska ayaa Dowladda Mareynkanka ugu mahadcel iyey deyn cafinta, wuxuuna sidoo kale ku bog aadayay safiirka Mareynkanka sida ay marka sta u garab yihiin Shacabka Soomaaliyeed.
Munaasabad uu xilka kula wareegay Ra’isul wasaaraha cusub ee xukummadda federaalka Soomaaliya Md.Maxamed Xuseen Rooble ay aa ka dhacday aqalka madaxtooyada jamhuu riyadda federaalka Soomaaliya waxaana uu kala wareegay sii hayihii xilka ra’isul wasaar aha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar).
Munaasabada waxaa goob joog ka ahaa guddoomiye ku Xigeenka 1-aad ee Golaha sha cabka barlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiwali Ibaraahim Sh. Muudey iyo xubno ka tirsan guddiga qaban qaabada diyaarinta xaflada xil wareejinta.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Md.Maxamed Cabdullaahi Farm aajo ayaa 17 bisha an u magacaabay xilka ra’isul wasaa raha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble kaddib mar kii 25 bishii agoosto ay golaha shacab ay kal soonida kala laabteen xukumadda hore ee uu hogaaminayay ra’isulwasaarihii hore ee dalka xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo Shalay si rasmi ah xilka ula wareegay ayaa shaaca ka qaaday lix arrimood uu mudnaanta koowaad siin do ono, isla markaana ay xukuumadiisa cusub ay ka dhabeyn doonto.
Rooble ayaa xusay in arrim aha Amniga, Doorashooyinka, Horumarinta Dhaqaalaha, Cad daaladda iyo Adeegga Bulsha da, ay yihiin arrimaha ugu mu hiimsan ee xiligan ay xooga saari doonto xuku umadda uu hogaaminayo.
Sidoo kale, Ra’iisal wasaaraha ayaa ku dhawaaqay inuu soo magacaabi doono khabiir sharci oo baaris iyo dabagal ku sameyn doona tacadiyada jinsiga ah ee ka dhanka Haweenka
Khabiirkaasi ayaa waxa uu dabagal iyo baaris qoto dheer ku sameyn doona kufsiga lagula kaco haweenka iyo caruurta, kaasi oo muddooyinkii dambe kusoo badanayay gob olada kale ee dalka.
Rooble ayaa magacaabistaasi sameyn do ona, isaga oo gacan ka helaya hay’addaha ca daalada dalka, midaasi oo qeyb ka ah tallaa booyinka ay xukuumadiisu kula dagaalameyso fal-dambiyeedyada noocaas ah.
"Waxaan soo magacaabi doonaa khabiir sharci oo gaar ah oo xil weyn iska saara baar ista iyo la dagaalanka tacadiyada Jinsiga (Kufs iga) ee lagula kaco haweenka iyo caruurta, si uu ugala shaqeeyo hay’adaha Cadaaladda iyo Garsoorka, waxaanu qaadi doonnaa tallaabo kasta oo ku habboon oo lagula dagaallamo fal- dambiyeedyada noocaas ah” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Ra’iisal wasaara ha.
Ra’iisal wasaare Rooble ayaa kusoo aad aya xili uu dalku marayo marxalad xasaasiya, isla markaana ay taagan-yihiin arrimo badan oo wax ka qabasho u baahan, iyada oo ay wel iba hortaalo qabsoomida doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii Villa Somalia.
Guddoomiye Mursal Oo Guddoomiyay Kul anka Guddiga Joogtada Ee Golaha Shacab
Guddiga joogtada golaha shacabka ee barlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soo maaliya ayaa Shalay kulankooda 3aad ee kal fadhiga 8-aad ku yeeshay xaruunta guddiyada iyo guddonka golaha shacabka barlamaanka Soomaaliya.
Kulanka waa guddoomiya nayay guddoom iyaha golaha shacabka ee barlamaanka ja mhuuriyadda federaalka Soomaaliya Md. Maxamed Mursal Sh.Cabdiraxmaan Iyada uu goob joog ka ahaan ku xigeenka 1aad ee gola ha Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muu deey.
Xubnaha guddiga ayaa kulankooda Shalay waxa ay uga hadleen shuruucda taala golaha shacabka iyo sidii loo kala horumarin laha ama mudnaanta loo kala siin laha maalmaha la kala gelinayo shuruucda golaha hor yaala.
Sidokale kulanka ayaa looga hadlay sidii shaqada baarlamanka loo kordhin laha isla ma rkaana inta waqtiga baarlamanka ka harsan loo dardar gelin laha tayada waxbarashada dal ka .
Gudoomiye Cumar Filish oo dhagax dhigay Dugsi Sare oo laga hirgalinayo Deegaanka Gubadleey.
Gudoomiyaha gobalka banaadir ahna duqa magalada muqdisho Md. Cumar Maxamuud Maxmed (Cumar finish) iyo sii hayaha wasiiru-dowlaha wasaaradda waxbarashada xukumad da federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Max amuud Cabdulle (Jaabiri) ayaa Shalay deega anka gudadleey ka dhagax dhigay dugsiga sar ee e gubadleey kaasi oo ay wax ku baran doo naan caruurta deegaan.
Munaasabad dhagax dhiga waxaa sido kale ka qeyb-galay ku xigeenada gobolka banaadir sida ku xigeenka maamulka iyo maaliyaqdda iyo ku xigeenka howlaha guud ee gobolka .
Maamulka deegaanka iyo qeybaha bulsha da ayaa masuuliyiinta kusoo dhaweeyay waxa ana ay ka hadleen baahida ay uqabaan bulshada xarun dugsi sare maadaama dee gaanka haatan laga dare emo isbedel isla markaana ay ku adagtahay in magaala da muqdisho ay usoo aadaan.
Sidoo kale waxaa goob ka ahaa masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaa nno ka tirsan barlamaanka jamhuuriyadda fede raalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna du qa Muqdisho Md. Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) oo la hadlayay bulshada deega anka ayaa ku bogaadiyay inay sii wadaan ol olaha isxilqaanka leh oo ay ku dhisanayaan xa rumaha danta guud ee bulshada loogu adee go.
Maamulka deegaanka Gubadleey ayaa ho re ololaha isxilqaan ugu dhisay Saldhiga Boo liska ,Dusgiga Hoose iyo dhexe, iyo sidoo kale xarunta maamulka oo ka kooban garoonka ciyaaha,xarun iskuul,qeybaha xafiisyada ma amulka iyo sidoo kale qeybo kale xarunta Cisbi taalka hooyada iyo dhalaanka ee deegaanka.
ugu dambeyntii dhismaha iskuulka gubadleey ee Shalay la dhagax dhigay waxaa iska kasha naya maamulka gobolka Banadir iyo wasaarad da waxbarashada dowladd Soomaaliya
Golaha Shacabka oo Maanta ka doodaya Hindise Sharciyeedka Qaxootiga
Xildhibaanada golaha shacabka ee barlama anka jamhuuriyada federaalka Soomaaliya ay aa maalinta Maanta ah waxaa ay ka doodi doo naan sharciyo dhowr ah.
Kulankaa ayaa ah kulan weynaha golaha waxaana ajandayaasha ay kala yihiin .
Akhrinta 1aad ee Hindise sharciyeedka dhismaha Hay a’adda diiwaangelinta dadw eynaha iyo bixinta aqoonsiga oo ay soo diy aarisay wasaaradda arrimaha gudaha federa alka iyo dib-u-hishiisiinta Dowladda Soomaa liya .
Sidoo kale waxaa ajandaha ka mid ah akhr inta koowaad ee Hindise sharciyeedka Qaxoo tiga.
Guddoonka golaha shacbka ayaa soo jeed iyay in la dardargeliyo howlaha horyaala go laha maadaama ay Dowladda uu yahay waqti kooban isla markaan loo baahanyahay in dha meystiro.
Madaxweynaha maamulka Somaliland, Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul uga jawaabay hadal uu Habeen hore madaxweynaha Soom aaliya ka sheegay dod ku sabsaneyd arrim aha dorashada ee 2020/21. Madaxweyne Farmaajo oo hadal ka jeedinayey dooda daasi ayaa sheegay in Som aliland aysan go’in kar in, isl amarkaana ay mid nimada Soomaaliya tahay mid muq adas ah.
Muuse Biixi Cabdi oo isna u jawaabayey Farmaajo ayaa yiri "Shantii Soomaaliyeed inay midoobaan reer Somaliland kow bay ka yihiin, laakiin Caqliga siyaasiyiinta Xamar jooga iyo 5 madaxeyne ma yahay kii Soomaali isu keeni lahaa?.”
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in Ma daxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Fa rmaajo) uu isaga uu yahay qofka wax ka socon la’yihiin, sida uu hadalka u dhigay.
"Farmaajo waxa aan leeyahay ha tilmaamin midnimo waadigii taababka u jaraye”. ayuu sii raaciyey Madaxweynaha Somaliland.
Si kastaba ha’ahaatee hadallladan kulul ee ay dhanka warbaahinta isku mariyeen labada madaxweyne ayaa ku soo aaday, xilli dhowaan wada-hadallada labada dhinac ay dib uga billowdeen dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Maamulka D/Dharkenleey oo u digay Saraa kiisha Ciidamada ku dhex heysta degmada
Maamulka degmada Dharkeenleey ee Gob olka Banaadir ayaa sheegay in gudaha degm adaasi ay ka bilaabeen howlgallo la xiriira dha nka Amniga, isla markaana lo oga horta gayo dadka dalalka am ni darro ka geystay deg madaas.
Guddoomiyaha Degmada Dhark eenleey Guhaad Sheekh Xasan ayaa sheegay in howlgallada ay Ciidamada Amniga ka fuliyeen guryo bar tilmaadeed u ah aa oo lagu iibinayay waxyaabaha maanka doo riya, waxaana uu u digay dadka Guda ha degmada ku dhex iibiya maa ndooriyaha noo cyadiisa kala duwan.
Guddoomiye Guhaad oo warbaahinta la ha dlayay waxaa uu sheegay in marnaba maa mulka degmada Dharkeenlay aqbaleyn in ko oxo hubeysan, sida Millateri ama macaawiisl eey iyo kuwa dhaca geysta inay hub ku dhex heystaan gudaha degmadaas.
Saraakiisha Ciidamada dowladda ee deg an Gudaha degmada ayaa waxaa uu uga dig ay inay ciidamadooda oo hubeysan ay dhex so cdaan Magaalada,waxaana uu sheegay in dhaca loo geysto dadka Shacabka ay saraaki isha mas’uul ka yihiin.
Degmada Dharkeenleey ayaa waxaa ay ka mid tahay degmooyinka mararka qaar dha ca logu geysto xilliyada habeenkii dadka Sha cabka ah,waxaana ay cabasho u gudbiyaan Maamulka degmada.
Dibad-baxyada looga soo horjeedo ciidama da Kenya oo ku sii xoogeystay Gedo
Dibad-baxyada ka dhanka ah ciidamada dalka Kenya ee ka socda gobolka Gedo ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya, kuwaas oo ka dhashay, kadib toogasho ay cii damadaas u geysteen dad shacab ah.
Banaan-baxyada oo galay maalintii sad dex aad ayaa Shalay mark ale dib uga bil lowday magaalada Ga rbahaar ey ee xarunta gobolka Gedo ee koonfurta So omaaliya.
Boqolaal shacab ah oo ka careysan dhiba atooyinka ay geysanayaan ciidamada Kenya ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaa ladaasi, si ay u cabiraan daroonkooda.
Sidoo kale dibad-baxyadan ayaa saameyn ballaaran waxa ay ku yeesheen dhaq-dhaqaa qa guud ee magaalada iyo ganacsiga.
Dadka dhigaya dibad-baxa ayaa ku qeylin ayo erayo ka dhan ciidamada Kenya, waxayna dalbanayaan in gabi ahaan laga saaro dalka oo dhan.
Kacdoonka ay wadaan shacabka ku dhaq an gobolka Gedo ayaa ka dhashay, kadib mar kii saddex qof oo shacab ahaa ay ciidamada Kenya ku dileen duleedka degmada Ceelw aaq.
Si kastaba ha’ahaatee dibad-baxyada oo sii xoogeysanaya ayaa dhinaca kale ciidamada Kenya waxa weli wadaan dhibaatada ay ku ha yaan shacabka, iyaga afar qof oo kale saac adihii la soo dhaafay ka afduubtay deegaanka Daaru-Salaan ee gobolka Gedo.
Trump oo soo xulay Garsoorihii bedeli la haa Haweeney geeriyootay
Madaxwaynaha Mareykankanka Donald Trump aya u soo xulay Amy Coney Barrett, in ay noqoto garsooraha maxkamada ugu sare ysa Mareykanka.
Madaxwayna Trump oo ha dal jeedinayay iyada oo ay barbar fadhido Amy Coney Barrett ayaa waxaa uu ku til maamay "haweeney gu ulo waawayn gaartay ".
Haddii ay aqalka sanetka ansixiyaan ayaa waxay garsoore Barrett badali doontaa Ruth Bader oo dhawaan geeriyoo tay iyada o ay da’deeda ah ayd 87 sano jir.
Soo xulidda uu maadaxwayne Trump u soo xu lay haween eydan ayaa waxay aqalka Sanetka ka dhex dhalin doontaa dood xooggan xilli do orashada madaxwaynanimada Mareykanka ee bisha November ay fooda inagu soo hayso.
Amy Coney Barrett oo hadal jeedisay ayaa madaxwaynaha uga mahadcelisay soo xulidda uu u soo xulay inay noqoto garsooraha maxk amda ugu sareysa Mareykanka.
Isgaarsiinta degaano ku yaalla xaddka Som alia & Kenya oo hawada ka maqan
15 deegaan oo ku yaalla xudduuda Soom aaliya ee dhinaca Kenya ayaa is-gaarsiinta ay ka maqan tahay muddo, waxaana go’an xiriir ka dadka dhexdiisa ah iyo lacagaha la isugu diro EVC Plus.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Ken ya ay jareen Isgaarsiinta xuduudda kadib howl galo ay ka fuliyeen deegaan adaasi.
Sidoo kale, afar qof oo ci idamada Kenya ee la dagaa lanka argagixisada ay toddo baadk an kala baxeen gury ahooda oo ku yaalla tuulo ho ostimaado Ceelwaaq, ay aa shal ay midkood la helay isaga oo meyd ah.
Shacabka gobolka Gedo ayaa shalay dhig ay banaanbax looga soo horjeedo falalka ciida mada Kenya, kuwaasi oo ka dha cay degmoo yinka Baardheer, Baladxaawo, Bu urdhuubo iyo Ceelwaaq.
Goob fagaaro ah oo lagu gubay Raashin & Daawooyin dhacay
Maamulka Dowladaha Hoose Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa Shal ay meel Fagaaro ah ku gubey Raashiin iyo Dawooyin Maamulka uu sheegay inay ahaay een kuwo dhacay. Howlgal ay sameeyeen Ciid amada Booliska Magaalada baydabo ayaa la sheegay inay ku soo qabteen Raashinka iyo dawooyinka dhac ay, kuwaas oo lagu iibinayay Suuqyada Magaalada Baydhabo.
Guddoomiyaha degmada baydhabo Xasan Macalin Axmed biikole ayaa sheegay in aan loo dul qaadan doonin in Guaha Magaalada Baydhabo lagu dhex iibiyo waxyaabo dhacay, isla markaana qofkii lagu qabto ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan.
Waxaa uu ugu baaqay ganac atada Magaalada baydhabo inay joojiyaan ka Ganacsiga waxyaabaha dhacay oo dhibaato u keeni kara Bulshada, ka maamul ahaana ay gui doonaan hadii ay arkaan.
Guddoomiyaha gobolka Baay Cali wardhe ere dooyow ayaa dhankiisa sheegay in ay si wadi doonaan howlgallada lagu baarayo dadka ka Ganacsanaya waxyaabaha dhacay si Bulsh ada magaalada loo badbaadiyo.
Maamulka Magaalada Baydhabo ayaa hor ay waxaa ay meel fagaaro ah ugu gubeen Raa shin noocyadiisa kala duwan, iyaga oo sheeg ay in uu ahaa mid dhacay oo lagu iibinayay
Xidigle Buulle Xuseen oo lagu dilay magaalada Muqdisho
llaha u naxariistee waxaa Ssaaka qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu dilay Xidigle Buulle Xuseen oo ka mid ahaa Booliiska Soo maaliyeed.
Marxuumka ayaa waxaa toogasho gaadma ah ku dilay rag ku hubeysnaa bistoolado, kuw aas oo goobta isaga baxsaday falka kadib.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Marxuum Buulle uu ka tirsanaa saraakiisha ciidamada ammaanka u xil saarnaa sugida amniga xar unta golaha shacabka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa goobta uu dilku ka dha cay daqiiqado kadib tegay ciidamo ka tirsan ku wa Booliiska Soomaalueed oo goor dambe ha lkaasi ka qaaday meydka marxuumka.
Ciidamada ayaa sidoo kale bilaabay baar itaano dheeraad ah oo lagu baadi-goobayo ko oxdii ka dambeysay falkaasi.
Illaa iyo hadda ma jiro wax faah faahin ah oo hay’adaha amniga ay ka bixiyeen toga shada loo geystay sarkaalkaasi.
Muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa gu daha magaalada Muqdisho ka dhacayey falal ammaanka darri oo u badan dilal qorsheysan.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha iyo Fe deraalka Xukuumaddii hore Cabdi Faarax Juxa ayaa ka hadly afar arrimood oo lagu xusuusan doono Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.
Mr Juxa oo ka mid ahaa Wasiiradii u gu horreeyay ee uu xilka ka qaaday Ra’iisul Wasaare Khe yre horaantii sanadkii 2018 ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku qoray in Xasan Cali Kheyre afar waxyaabood oo taariikhda siyaasadda uu ku galay.
Maxaa lagu xasuusan doonaa Raysal was aare Khayrre?
Afar wax oo muhiim ah oo uu taariikhda si yaasadda Soomaaliya ku galay ayaa ah:
1. Raysal wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ilaa iyo 1960-kii (saddex sano iyo bar).
2. Raysal wasaarihii ugu dhowaa muddo xile edkiisa Madaxweynihiisa oo ay xafiisyadoodu isku milmeen in kabadan intii loo baahnaa.
3. Raysal wasaarihii ugu horreeyey oo lagu eryo 7daqiiqo oo aan laaluush lagu bixin. (Ugu miisaan siyaasadeed yaraa).
4. Raysal wasaarihii ugu horreeyey oo loo di ido inuu xil wareejo, isagoo jooga oo weliba warqad rasmi ah oo codsi ah gudbistay.
Waa iska xaal adduun.